Momba ny Yurie BSF - Fiorenana voalohany amin'ny fambolena tsy fahampian-tsakafo eran-tany
Momba ny Yurie BSF
Momba anay - Momba an'i Yurie BSF no hany orinasa dia nanomana ny fambolena BSF ho an'ny fambolena maoderina, Ny programa 10 dia mampitombo ny Yurie BSF ho toy ny fiara mahomby amin'ny fambolena BSF maoderina tsy misy fofona. Mampitombo ny fambolena fanafody tsy misy fofona amin'ny bibikely miloko marefo.
Ao amin'ny dingan'ny fambolena maggot nefa tsy mampiasa fofona
Tratra fivarotana, RT
Fisotroana biby fiompy ary
Tsy misy fanafody, tsy misy fanafody ary tsy misy milina. Miaraka amin'ny fampahalalam-baovao na ny fitaovana manakaiky ny maha-mora foana azy satria maro no misy any amin'ny faritra rehetra ary matetika no tsy raharahiana.
Na dia ny olana goavana amin'ny tontolo iainana aza dia lasa olana goavana, maloto ary mahia. Ny fandrosoana nataonay tamin'ny haino aman-jery telo miaraka amin'ny tanjona hamonjena mba hahafahan'ireo tantsaha hahazo tombontsoa bebe kokoa satria saika maivana ny entana.
Izany koa dia fanehoana ny fiahian'i Yurie BSF ny olan'ny fako, ny fako sy ny ala ao Indonezia. Ny fanantenanay dia ny fomba fambolena fingotra tsy misy alika dia mety ho vahaolana iray ho antsika rehetra mba hahatonga an'i Indonesia ho madio kokoa.
Ny fahitana sy ny misiônantsika dia hita taratra amin'ny teny filamatra, Greetings ary CLEAN MY INDONESIAN. Amin'ny alàlan'ny fambolena maggot no manantena fa ny mpanjono, ny biby fiompy ary ny biby mpamboly dia tsy mahazaka afa-tsy ny famatsiana, ny sakafo izay manankarena ny sakafo sy ny proteinina ambony ary ny fandaniana manodidina ny Rp.
Amin'izay karama ambany dia antenaina fa afaka manana fanantenana bebe kokoa ny tantsaha amin'ny fampivelarana sy fampitomboana ny biby fiompiny. Satria hatramin'izao dia maro ny tantsaha izay nandeha lavidavitra satria tsy vitany ny nanangom-bola ny biby fiompiny.
Ny sakafo natokana ho an'ny biby dia vokatra vokatra izay mety hahatratra ny 70%. Mbola eo amin'ny taratasy ihany izany. Ireo izay vao nanomboka io sanda io dia afaka mitombo hatramin'ny 80%.
Mazava ho azy fa tena mampidi-doza izany satria:
fahafatesana ny biby fiompy
mihena ny vidin'ny varotra ary
Tsy maintsy dinihina koa ny antony hafa.
Ny fambolena fary dia ny lova avy amin'ny vahoaka indonezianina nomena antsika. Jereo fotsiny hatramin'ny taloha izay efa nampitandreman'izy ireo fa ny fahombiazan'ny biby fiompy dia mila sakafo voajanahary sy endriny hafa.
Ity hafatra ity dia voasoratra mazava ao amin'ny boky tsirairay vita printy momba ny fitantanana ny fitehirizana sakafo izay amidy amin'ny fivarotam-boky. Niara-niasa tamin'ny literatiora efa nisy izahay tamin'ny fomba famolavolan'ny famolavolana ho an'ny fomba fambolena BSF, izay tsy misy fofona.
Ny fomba fambolena BSF amin'izao fotoana izao tsy misy fofona, ankoatra ny vokatra be dia be ary ny magot-maggot vokatra dia salama satria voatahiry tsara. Ary koa miantoka ny fiarovana ny fandraharahana maharitra, izany hoe tsy misy fofona, vokatra be dia be sy maharitra.
Ny fofona nateraky ny dingan'ny fambolena dia zava-doza lehibe amin'ny fitohizan'ny orinasa amin'ny fanomezana sakafo mora. Ny fambolena alika tsy misy ala, ankoatra ny tsy mampahazo aina an'ireo tantsaha, dia manasa bibikely toy ny rat, kakazo, bibilava ary fahasalamana ho an'ny tantsaha ihany koa.
Raha ny filazàna fa ny loto vokatry ny loto dia niteraka hetsi-panoherana avy amin'ny fianakaviana, ary mazava ho azy fa tsy hangina ny vondrom-piarahamonina raha miparitaka manerana an'izao tontolo izao ny fandotoana fofona. Misy ohatra maro momba ny tranga any amin'ny faritra sasany amin'ny orinasa maggot aorian'ny fampisehoana isan-taona ary ao anatin'ny fihetsiketseham-bahoaka ary tokony hifarana.
Tena mampidi-doza ity toe-javatra ity, very maina ny asa mafy izay niady. Noho izany, hatramin'ny fiandohana, ataovy azo antoka fa mikasa hanao raharaham-barotra tsy misy fofona ianao. Raha tsy tena manomana ny bankirompitr'ilay orinasa ianao.
Amin'ny ezaka hanatrarana ny nofintsika SAVE sy CLEAN MY INDONESIAN. Misy programa momba ny 10 izay efa nomena ny SOP (fomba fiasa serivisy) mba hanamorana ny fampiharana ny asan'ny labozia isan'andro.
Amin'izao fotoana izao dia niparitaka tany amin'ireo tanàn-dehibe 99 manerana an'i Indonezia izahay. Mifidy ny toerana akaiky indrindra amin'ny toerana misy anao ianao.
Momba ny Advantista 10 an'ny Yurie BSF
1. Vokatra maro be tsy misy fofona.
Ianao dia tarihina avy amin'ny zero mba hahomby amin'ny famokarana maggot tsy misy fofona, manomboka amin'ny fianarana mivantana mivantana ao amin'ny garderie izay azonao atao amin'ny tanànan'ny 99 any Indonezia.
Isan'andro dia hampihetsi-po anao ianao miaraka amin'ny mpanolo-tsaina manokana (fa tsy rafi-pianarana) ary hitohy amin'ny tari-dalana azo ampiharina ao an-trano mandra-pahombiazanao. dia Ny tombontsoa azo amin'ny fambolena tsiranoka tsy miankina amin'ny fianarana mahazatra dia:
Mifantoha amin'ny anao
Hahafantarana manokana ireo mpandalina efa za-draharaha mba hahafahanao miantoka ny fifantohan'ny mpanolo-tsaina ary ianao dia feno amin'ny zavatra tadiavinao sy andrasanao.
Ity fomba fiasa manokana ity dia ahafahan'ny mpanolo-tsaina manome vahaolana maimaim-poana fa tsy rafi-pampianarana.
Miaraka amin'ny boky torolàlana fampiharana nomena ary azo vakiana amin'ny fampiharana Yurie BSF ao amin'ny playstation. Mamela anao hianatra bebe kokoa sy hatoky tena kokoa alohan'ny fampiharana any amin'ny toeram-piompiana
Mentor tsara indrindra
Hanaraka ny tari-dàlana ianao avy amin'ireo mpanoro hevitra tsara indrindra izay nahomby tamin'ny fambolena ny BSF maoderina tsy misy fofona. Iza no faly amin'ny fizarana traikefa? Tena mahasoa anao izany, satria afaka mampiseho ny fomba fampiharana ny kôpity tsy misy fofona amin'ny antsipiriany.
Ity fomba ity dia hanatsara ny fahaizanao mamaha ny olana amin'ny fomba fanaonao isan'andro ao an-trano rehefa vita ilay fanao.
Mianatra sy mianatra any amin'ny faritra iray manontolo ianao any amin'ny toerana tena be mponina.
Azo atao ny fambolena alika raha tsy misy ny fandrahonan'ny demo avy amin'ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina satria izy io dia tsy natao hanamboarana fofona.
Na dia ny sasany amin'izy ireny aza dia miteraka fambolena alika ao an-trano amin'ny fampiasana ny efitrano fandrian'ny ankizy.
Eto ianao dia tena ampianarina mba hahafahanao mamboly atsy sy aroa amin'ny tany maro ary tsy misy tahotra ny fihetsiketsehana.
Mitombo ny fahatokisan-tena
Mifototra amin'ny traikefa, ny iray amin'ireo antony tsy fahombiazana dia ny henatra amin'ny fangatahana ary amin'ny alalan'ity rafitra manokana ity, ny zavatra azo vahana. Satria Ianao irery sy ny mpanolotsaina dia samy afaka hampitombo ny fahatokisanao amin'ny fianarana raha tsy matahotra na menatra mangataka
Mpiara-miasa amin'ny tena manokana
Azonao atao ny mifidy ny mpanolo-tsaina tsara indrindra ao amin'ny tanànan'ny 99, manana safidy ny mpanolo-tsaina 99 izay tianao ary mifanaraka amin'ny zavatra ilainao indrindra.
Nahomby ny fahombiazana
Ny mpanolo-tsaina voaofana dia afaka manome traikefa arak'ireo fanamby misy any amin'ny tanàna tsirairay avy. Azo atao izany satria ianareo sy ny mpanolo-tsaina dia eo amin'ny toerana eo akaiky ary ny tena olana momba ny saha dia fantatra.
Mamaritra ny andro sy ny daty ianao, ka tsy hanelingelina ny asa atao na ny hafa izany.
Manana fahafahana hifanakalozan-kevitra ianao satria hahatakatra tsara kokoa ny mpanolo-tsainao ary hanome ny fanohanana ilaina
Rehefa azonao ny maggot, dia ho baomba ianao, afaka manamboatra milina BSF miaraka amin'ny raki-daza manokana ary manangona hatramin'ny 83%
Tsy mila misafotofoto amin'ny marketing maggot ianao. MANDEHA BSF TO YURIE !!! Manaiky ny fivarotana maggot izahay ary mividy ny kôpinao Rp7.000 / kg
Raha mivarotra amindry ny Yurie BSF ianao. Ankoatr'izay, nanomana programa fanampiana hampivelarana ny business maggot izahay. Ny fanampiana voalohan'ny Rp100.000.000 dia ampiasaina hampitomboana ny famokarana vokatra.
Ny fanampian'ny namana dia naverina ary nampiasaina tamin'ny MAGGOT. Miaraka amin'ny lanjany tsy misy blower - tsy misy ribà !!!
5. Ambasadera Yurie BSF
Amin'ny fampiharana isan'andro, indraindray dia tsy azo sarahina amin'ny olana tokony hovahana izany. Miara-miasa amin'ny Yurie BSF ambasadaoro ianao, vonona ny ho tonga ao amin'ny toeram-piompianao mba hamaha ny olana atrehanao.
Tari-dalana momba ny fitantanana amin'ny sehatry ny fitantanana maharitra. Noho izany antony izany dia ny fandaharan'asa dia ny fiantohana ny kalitaon'ny maggot vokatra dia manana kalitao ambony. Amin'ny alalan'ny fampiofanana amin'ny fiofanana avo lenta.
7. Indoneziana Maggot Cooperative
Mba hahatonga antsika ho ampahany amin'ny tsena nasionaly dia manomana ny kooperatives Indoneziana. Io no toerana hividianana sy hivarotana ny vondrom-piarahamonina Yurie BSF.
Ny dingana manaraka dia ny hahatonga ny fivoaran'ny orinasam-pitrandrahana indostrialy ary koa ny fahafahana mihaona amin'ny fangatahana tsena anatiny sy iraisam-pirenena.
Ny orinasa Corporate Social Responsibility (CSR) dia manokana ho an'ireo izay tena tsy afaka mividy ny fonosana BSF maoderina tsy misy fofona.
Mivavaha ary andramo
Tsy maintsy mivavaka isika fa ny dingana tsirairay raisintsika dia miaro an'i Allah SWT.
Ao amin'ny sehatra samihafa, Yurie BSF dia manomana sakafo ara-tsakafo manokana amin'ny dingana famokarana angovo BSF. Vokatr'izany Fizarana ity dia mifantoka amin'ny famokarana ny kalitao tsara indrindra amin'ny fampiasana fitaovam-pako amin'ny fambolena voajanahary amin'ny fiaraha-miasa amin'ny indostrian'ny sakafo sy orinasa malaza any Indonezia sy izao tontolo izao. Ny Yurie BSF dia manokatra fahafahana hiara-hiasa amin'ny antoko maro hanohy hampivelatra ny famokarana sy ny varotra ny maggot.
Raha liana ianao dia mifandraisa aminay.